Faah Faahin dheeri ah oo ka soo baxaya qaraxii ka dhacay Hotel Jazeera – STAR FM SOMALIA
Faah faahin ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo lala eegtay Jazeera Palace Hotel, iyadoo qaraxan uu bur buriyay qeybo badan oo ka mid ah dhismaha Hotelka.
Ugu yaraan 13 ruux ayaa la xaqiijiyay illaa iyo haatan ku geeriyoodeen in kabadan intaasna waa ay ku dhaawacmayn qaraxan oo dhacay abaarihii 4-tii galabnimo iyo qadaro daqiiqado ah, waxaana qaraxa uu ahaa mid aad u gil gilay magaalada inteeda kale.
Laamaha ammaanka dowladda ayaa sheegaya inay wadaan tira koobka saxda ah khasaaraha ka dhashay weerarkan, waxaana xiran wadada isku xirta Garoonka diyaaradaha iyo KM4.
Afhayeenka Guud Ee Ururka Al Shabaab, Sheekh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere), ayaa ku dhawaaqay in Xarakada Al Shabaab uu ka dambeeyay weerarkii galabta lagu qaaday Hotel Jazeera, oo ku yaala Degmada Wadajir, kuna dhow Garoonka Aadan Cadde.
Gaari iska rogge ahaa oo lagu fuliyay weerarka, ayaa xoog ku galay albaabka hore ee Hotelka, waxaana u suurta gashay in uu isku qarxiyo ilinka hore ee Hotelka. Waxa uuna qaraxaasi gaystay khasaaro dhimasho, dhaawac iyo burbur maaliyadeedba.
.Sidoo kale warbaahinta taageerta Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkan uu aar-gud u ahaa dadkii lagu laayay Gobollada Bay iyo Bakool.
Marka aad eegto muuqaalka Hotelka iyo sidii uu horay ayaa ah mid aan la qiyaasi karin, waxaana qaraxan uu ahaa mid noociisa aan horay loo arkin.
Dhismayaal ku dhowaa Hotelka ayaa gebi ahaanba bur buray, waxaana la sheegayaa in dhismayaasha qaar ee dumay meydad laga soo saarayo.
Gawaarida ambalaasta ayaa dhaawacyo fara badan ka daad gureynayay goobta ay wax ka dhaceen, walina ma jirto tiro rasmi ah oo ah dhaawacyada, waxaana la geeyay isbitaalada qaar.
Hotelka Jazeera ayaa ah hotel qaab casri ah u dhisan, dhowr jeer ayaa Al-Shabaab ay weerartay, balse khasaarahan maanta oo kale uma gaarin